मुला जाडो चिसो पछि मानव यसको ताजगी र खनिज पदार्थ को वजन प्रसन्न जो पहिलो तरकारी, छ। तरकारी जो एक Cherriet F1 छ, धेरै प्रजातिहरू र संकर छ। यसको खेती लेख पढ्नुहोस्।
हाइब्रिड मुला Cheriet F1 खुला हावा र Greenhouses मा बेड मा खेती लागि हो। प्रारम्भिक पकने द्वारा विशेषता। खैरो हरियो पात एक अर्ध खडा आउटलेट गठन। रातो जरा एक गोलाकार आकृति र एक ठोस छोटो भन्दा माथि छ। भ्रूण सतह सेतो रसदार मासु, खस्ता लाइन, यसलाई voids र तीता गुमाएको छ। मध्यम मसालेदार स्वाद पनि overripe तरकारी रहनेछ।
मूल वजन 25-30 G छ। हाइब्रिड को तीर छैन भनेर मुला Cherriet F1 - वर्ष राउन्ड संस्कृति। साथ 1 वर्ग मीटर मुला को 3-3.5 किलो संकलित छ उत्पादकत्व, उच्च छ। तरकारी powdery फफूंदी र cruciferous फ्लिया गर्न प्रतिरोधी।
मुला को प्रयोग
यो तरकारी भिटामिन immunoukreplyayuschego उच्च मूल्यवान छ - मांसपेशी टोन कायम गर्न मानव शरीर आवश्यक छ जो सिलिकन। मुला Cherriet F1, मूल्यांकन जो प्रायजसो सकारात्मक anthocyanin धनी, अर्थात् बोट रोगन, हृदय रोग संग देखाइएको छ जो। यो पदार्थ तरकारी गुलाबी दिन्छ छ। Anthocyanin मुला विरोधी भडकाऊ र hemostatic प्रभाव को संरचना मा, रक्त नली को लोच बढ्छ कोलनले मा क्यान्सर रोक्न।
वजन कम गर्न मद्दत गर्छ चमत्कार तरकारी मुला Cherriet F1। समीक्षा यो केवल सकारात्मक बारेमा ठूलो तपाईंका मानिसहरू, किनभने 100 GR मा। मात्र 14 क्यालोरी मुला! मुला, चयापचय सुधार बोसो को पाचन गर्न खपत गर्नुपर्छ। ठूलो परिमाणमा यसलाई toxins र कोलेस्ट्रल को excretion बढावा जो फाइबर, समावेश छन्। लसुन, टमाटर, बीट मा जस्तै रकम फाइबर मुला।
मधुमेह देखाउन त मुला, रक्त शर्करा पत्र। तरकारी उपयोगी प्रोटीन मा धनी छ। तर हेरविचार यसलाई आवश्यक तेल रीस उठाउनु समावेश रूपमा, मान्छे पेट अल्सर देखि पीडित को लागि मुला खान लग्नु गर्नुपर्छ।
यो तरकारी को एक ठूलो विविधता संगठित छन्। मुला सबै प्रजातिहरू निम्न मापदण्ड अनुसार वर्गीकृत भएको थियो:
मुला परिपक्वता समाप्त हुँदैछ प्रारम्भिक, मध्य, लेट छ।
, रातो, गुलाबी, पहेंलो, बैजनी र सेतो - मूल बाली को रंग।
गोलो, राउन्ड, oblong - आकार मा।
ग्रेड मुला Cherriet F1 सबै भन्दा राम्रो गुण हो, यो आकर्षित थियो लागि जलवायु क्षेत्र गर्न निस्कने ल्याए देखाउन सक्छौं। यस्तो माटो, तापमान, चिस्यान रूपमा क्षेत्रीय संकेतक, रूपमा मूल बाली को किसिमहरु चयन गर्दा विचार गर्नुपर्छ। सबै गर्मी बेड मा हुर्केका मुला, यो सर्तहरू जो परिपक्वता फरक नै समय फरक ग्रेड, मा बिरूवा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसरी, प्रारम्भिक मुला कम उपज मा, तर यो तेजी maturing छ। ग्रेड लेट विशेषता उदार पैदावार, रोग प्रतिरोध र दीर्घकालीन भण्डारण (वसन्त अघि) पकने।
मुला एक चिसो प्रतिरोधी बिरुवाहरु छ। बाली प्रारम्भिक लागि, केही अवस्था पालन गर्नुपर्छ:
डेलाईट को अवधि द्वारा रोशनी।
सुविधाहरू बिरुवाहरु र माटो loosening टीन।
खेती र हेरविचार सबै नियम अनुपालन वर्ष राउन्ड उच्च पैदावार उपयोगी मूल अनुमति दिन्छ।
Cherriet F1 किन लोकप्रिय मुला?
मुला माली को धेरै किसिमहरु बीच बारम्बार Cherriet F1 चयन गरियो। खेती र मर्मतका, उच्च उपज र प्रारम्भिक पकने समयमा undemanding समीक्षा, यो एक विशेष, अद्वितीय तरकारी छ कि निष्कर्षमा नेतृत्व।
यो विविधता जसबाट कहाँ यसलाई अन्य तरकारी रोपेर गर्न सम्भव छ बेड मा धेरै ठाउँ मुक्त, छिटो-प्रभाव बाली लागि राम्रो छ। दर्जा कारक को एक अधिकता बनेको। ती पहिले नै सूचीकृत लागि, तपाईं चिसो तरकारी प्रतिरोध थप्न सक्नुहुन्छ। मुला Cherriet F1 को सामान्य वृद्धि लागि दिन मा 16-20 डिग्री यसलाई Suffice।
रोपण प्रारम्भिक तरकारी बरफ पिघलने पछि बाहिर, तर तुरुन्तै। यो माटो dries सम्म प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। यो गिरावट मा बेड खन्नुहोस् गर्न सिफारिस गरिएको छ - यो वसन्त को काम सुविधा हुनेछ। बीउ माटो मा रहने र तिनीहरूलाई हेरचाह छर्न: पानी धेरै पटक एक दिन, पातलो बाहिर आवश्यक भएमा।
जमीन मा रोपेको बीउ अप्रिल, महिना-अन्त वा मे को शुरुवात को शुरू संग बाहिर छ। बीउ पहिलो नुन को वाहेक संग पानी मा भिगो गर्नुपर्छ। खाली प्रतिहरू रोपण लागि अनुपयुक्त निस्कनु - तिनीहरूले वेवास्ता हुनुपर्छ। बीउ 1 सेमी माटो मा अझ बलियो र माटो ढाकिएको। 15 सेमी - तिनीहरूलाई बीच दूरी कम से कम7सेमी र पङ्क्तिहरू बीच हुनुपर्छ।
उदाहरणीय रोपेको मिति हो: अप्रिल 20, मे 10, 1 र 20 जुन, 10 जुलाई, 20 अगस्ट। बीउ को प्रारम्भिक प्रजातिहरू को अंकुरण लागि पर्याप्त 4-5 डिग्री सेल्सियस छ। तिनीहरूले डर र subzero तापमान (लगभग5डिग्री) छैनन् हुनत। को त बीउ छिटो अङ्कुराउन र बलियो बन्न - तर, राम्रो बाली एक उच्च तापमान (लगभग 20 डिग्री सेल्सियस) मा बाहिर।
स्वस्थ बिरुवा - फसल राम्रो गर्न कुञ्जी। को बिरुवा एउटै स्वरमा अङ्कुराउन गर्दा आफ्नो, यदि आवश्यक, तपाईं पातलो बाहिर गर्न आवश्यक छ। रोपण पछि गहन सिंचाई संकर मुला Cherriet आवश्यक छ। सुविधाहरू प्रजातिहरू को एक उच्च उपज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई टीन छ एक जो खेती को सबै नियम, विषय मा निहित।
बिरुवा, यो आवश्यक तिनीहरूले एक दिन दुई पटक पानी हाले गर्नुपर्छ, प्रारम्भिक बिहान र राति लेट। मुला संग बेड बाहिर कहिल्यै सुक्खामा गर्नुपर्छ। माटो टाढा धोए छ, र जरा नंगे कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग टीन गर्दा। जमीन छिडकना आफ्नो तत्काल आवश्यकता, अन्यथा विकास र गठन धीमा हुन सक्छ। रोपेको 20-30 दिन पछि फसल।
मूल बाली, जो Cherriet समावेश को राउन्ड आकार संग तरकारी को प्रजातिहरू, सुरक्षित हस्तान्तरण फरक लोकस परिवर्तन। मूल तरकारी को लामो फारम transplanting गर्दा ग्रस्त गर्न सक्छन् जो मूल को सहभागिता, संग गठन गरिएको छ किनभने यो छ।
माटो गुणस्तर उपजको, स्वाद र जरा को उपस्थिति मा निर्भर गर्दछ। बीउ रोपेको अघि6महिना - माटो तयारी अग्रिम गर्नुपर्छ। यो उद्देश्य लागि यो जोडा मल (पोटासियम फस्फेट को 40 ग्राम र 15) dug।
यो लिटमसकागज संग माटो अम्लता परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यदि अम्लीय माटो, प्रति 1 Sq.m. प्रति 1 बाल्टिन खाद हालन थप्न वर्ग बेड। यो माटो ढीले र नम आवश्यक छ।
खुला जमीन अवस्था बढ्दै
केही अवस्थामा यो मुला Cherriet F1 बढ्छ। यस उर्वर माटो मा खेती तिनीहरूलाई को छ। यो तरकारी लागि उपयुक्त loam वा loamy भूमि हो। पीट र खेती मा बढ्न सक्दैन। agrotechnics अवस्था वैकल्पिक संस्कृति सिफारिस गरिएको।
मुला माटो अझ उपयुक्त, अन्य अप भयो आफ्नो जसमा बगैचा बिरुवाहरु: आलु, खीरे, बन्दागोभी। धरण, खाद हालन: माटो मा शुरू जैविक मल बीउ रोपेको अघि। प्रति वर्ग मीटर केवल एक बाल्टिन। सर्वश्रेष्ठ अकार्बनिक मूल fertilizing "Ogorodnaya मिश्रण" छ। को बेड कम दस बाह्र गर्न सेन्टिमिटर हुनुपर्छ।
हरितगृह अवस्थामा बढ्दै
यो विधि खुला हावामा बेड मा बढ्दै भन्दा गाह्रो छ। मुला Cherriet, जो को वर्णन, बन्द अवस्थामा कुरा बढ्छ, माथि हेर्नुहोस्। यसको विकास छ जरा किन कठोर छन् तीव्र उड्ने शूटर, द्वारा विशेषता छ। कहिलेकाहीं तिनीहरूले बढ्न छैन।
यो तरकारी सूर्य रुचि किनभने मुला संग बेड लागि, जहाँ त्यहाँ सधैं हल्का धेरै छ ग्रीनहाउस, एक स्थान चयन गर्न आवश्यक छ। यदि यो सम्भव छैन, यो थप प्रकाश स्रोतहरु प्रयोग गर्न आवश्यक छ - यी दीपक फ्लोरोसेन्ट सक्छ।
चिसो प्रतिरोधी बाली लागि मुला Cherriet F1 समावेश गर्नुहोस्। समीक्षा बारेमा तरकारी रूपमा किसानहरु लागि ठूलो महत्व छन्। किन त्यहाँ ग्रीनहाउस मा तातो हुँदैन भन्ने छ, यो निरन्तर तापमान निगरानी गर्न आवश्यक छ। यदि यो 25 डिग्री भन्दा बढी, फल भित्र listless र voids बढ्नेछ। हरितगृह मुला लागि इष्टतम 18-20 डिग्री को तापमान हुन मानिन्छ। यसको मर्मतका लागि नियमित प्रसारित गर्नुपर्छ।
उच्च पोटासियम र नाइट्रोजन संग माटो मा बीउ रोप्न, राम्रो फसल प्राप्त गर्न। यो अम्लीय माटो प्रयोग गरिएको छ भने, मुला जस्तै हर्निया जस्ता रोगहरु उजागर हुनेछ। यसलाई जो अझ उपयुक्त यसलाई आफ्नो ग्रीनहाउस बढ्दै लागि छ निर्धारण गर्न, मुला धेरै प्रजातिहरू रोपेर गर्न सिफारिस गरिएको छ। हरितगृह तरकारी, जो तरकारी बगैचा बेड मा बढ्न गर्नेहरूका लागि जस्तै ख्याल।
जब पहिलो मार झिंगा र beetles लड्न निवारक उपाय संग हतार गर्नुपर्छ। यी साना किरा कमजोर rostochku जलाएर छन्। यो गर्न, बिरुवा सुर्ती धूलो वा काठ खरानी छिडकना गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भिक वसन्त मा लगाएको मुला, मौसमी चिसो प्रभावित गर्न सकिन्छ। यो जोगिन, plantings संग बेड हवादार दिन को समयमा छोटो समयको लागि खोलिएको हुनुपर्छ जो एक पारदर्शी फिलिम पलीथीन बनेको, लुकाउन गर्नुपर्छ।
एक फंगल रोग अक्सर ग्रीनहाउस मुला Cherriet F1 असर गर्छ। यसरी सम्झन्छन् यो रोग धेरै नकारात्मक छ -, मूल darkens को घाँटी पतली हुन्छ, को बिरुवाहरु Rot। यदि यो हुन्छ, यसलाई विस्थापन वा तामा सल्फेट (2 चमचा तातो पानी बाल्टिन) को एक समाधान संग माटो सुधार गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तर सबै माथि, प्रभावित बिरुवाहरु हटाइनु पर्छ। मुला एक ग्रीनहाउस मा बढ्छ भने, तपाईं हावा नियमित कोठा गर्न आवश्यक छ। दूषित माटो पोटासियम Permanganate को एक समाधान संग उपचार छ, र त्यसपछि बालुवा गीली।
बोट रोगहरु र किरा द्वारा आक्रमण विरुद्ध रोकथामका उपाय बेड र बाली अवशेष को आसन्न क्षेत्रमा सफा छ। रोपेको अघि, बीउ आफ्नो संक्रामक रोगाणुओं देखि अप खुसीले गदगद हुनुपर्छ। चरम अवस्थामा, बोर्डो मिश्रण स्प्रे प्रयोग गर्नुहोस्।
Houseplants transplanting लागि अनुकूल दिन चन्द्रमा वा आमा प्रकृति बताउन
Mulching कट घाँस - आफैलाई र बगैचा बेड मदत
फूल इयुकलिप्टस: प्रकृति को एक अद्भुत सिर्जना
अधिक छिटो सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो रूख पानी?
Pereprivivki र वसन्त मा कलमी स्याउ रूखहरू
"Hemomitsin" (बच्चाहरु को लागि निलम्बन): को निर्देशन। "Hemomitsin" - मौखिक लागि निलम्बन लागि पाउडर
युवा श्रृंखला कि षड्यन्त्र र उतेजित गर्नु
मेरो आमा कसरी बताउन म गर्भवती थियो किनभने म मात्र 15 छु?
भूमि र Gelendzhik मानिसहरूलाई। समुद्र मा आराम। ठाँउहरु
"तारा" टाटु आफ्नो काँध मा: मान। convicts को काँध मा तारा के?
इलेक्ट्रनिक सिगरेट जयटेच eVic सुप्रीम - धूम्रपान को मुकाबला गर्न को लागि मूल तरिका
Munchkin - छोटो खुट्टा र perky वर्ण बिरालोहरु!
सेरेना Residence3* (बुल्गारिया, Sozopol): होटल, सेवा, को विवरण